amụma nzuzo | Free Sport TV
Ọ dịghị video ma ọ bụ vidiyo na-kwadoro a na saịtị. Ọ bụla nke video i nwere ike ịhụ ebe a nwere ike nwetara maka free on saịtị dị ka Justin.tv, Ustream.tv, Selfcast, na ọtụtụ ndị ọzọ. Rịba ama na anyị anaghị ekwe nkwa ma ọ bụ ekwe nkwa na anyị na-ejere na ọ bụghị maka ihe ọ bụla edinam nke anyị ọrụ. Anyị enweghị mmekorita na adịghị rịọ ka nwere mmekorita ya na ihe ọ bụla nwe video ma ọ bụ iyi nke e nyere anyị website. All ọdịnaya bụ nwebisiinka nke ndị nwe ha.
1. Ibu ọrụ
1.1 Ezie na anyị mere ihe niile kwere omume ke nkwadebe nke anyị na saịtị, na anyị na-agwa gị na ọ bụ nyochawa-agaghị ekwe omume na-agba ọsọ ya na-enweghị ọ bụla mmejọ. Ọ dịghị akwụkwọ ikike nwere ike e nyere banyere iso ọrụ nke anyị website na anyị na-ibu ọrụ ọ bụla bụrụ na ọ ga-abụ ọtọ n'ihi mmejọ ma ọ bụ mmezi.
1.2 Ị ga-aghọta na ozi niile a na-ndị ọzọ nyere anyị kpam kpam akpọrọ ọrụ ha. Otú ọ dị anyị abụghị dara iwu maka ozi a.
1.3 Ọdịnaya na anyị website complies na Swedish iwu ma anyị na-dịghị ibu ọ bụla na-abụghị nnabata na mpaghara dị mkpa iwu na ndị ọzọ meworonụ.
2. Links na site na weebụsaịtị
2.1 Nke a website nwere hypertext nweghị njikọ nke saịtị na-agba ọsọ site na otu nke atọ. Na anyị na-agwa gị na anyị na-enweghị akara nke ọ bụla si dị otú ahụ weebụsaịtị na ọ bụghị maka ihe ndị ọmụma e nyere ha.
3. Jiri nke ozi
3.1 Anyị abụghị ndị nwe nke ozi ọ bụla e nyere website. N'ihi ya, anyị abụghị ndị na-ahụ maka ihe ị na-eme na ya. Ị nwere ike na-ekesa ozi ma ọ bụrụ na ha mbụ nwe nwere ihe ọ bụla megide.
Copyright © 2015 freesport-tv.com | Amụma nzuzo